आगामी महाधिवेशनमा हामी सफल हुनेछौँ : डा. शेखर कोइराला - Grameen Khabar
आगामी महाधिवेशनमा हामी सफल हुनेछौँ : डा. शेखर कोइराला
२०७८ मंसिर २९, बुधबार १८:१०
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा सभापति पदमा पराजित नेता डा। शेखर कोइरालाले अर्को महाधिवेशनमा आफूहरु सफल हुने बताउनुभएको छ ।
बुधबार मतदातालाई धन्यवाद दिन आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा। कोइरालाले यस्तो बताउनुभएको हो । आफू आजैदेखि काँग्रेसको रुपान्तरणमा लागिसकेको भन्दै उहाँले आगामी अधिवेशनमा सफल हुने बताउनुभएको हो ।
‘नेपाली काँग्रेसभित्र युवा पुस्ताका लागि अवसर नै अवसर खोलिदिएका छौँ । अब गाउँघरमा बस्दा म नेपाली काँग्रेसको हुँ भनेर बस्न सक्नु हुनेछ’, कोइरालाले भन्नुभयो, ‘म आजैदेखि नेपाली काँग्रेसको रुपान्तरणमा लागिसकेको छु । अब म तपाईंहरुको घरदैलोमा पुग्नेछु । आगामी अधिवेशनमा हामीहरु सफल हुनेछौँ ।’
डा। कोइरालाले आफूहरुले भागबण्डा र गुटबन्दी नगर्ने उल्लेख गर्नुभयो । काम गर्दै जाँदा मतदाता सोच्न बाध्य हुने उहाँको भनाइ छ । ‘हामी भागबण्डा र गुटबन्दीमा लाग्दैनौँ’, डा। कोइरालाले भन्नुभयो, ‘हामी राम्रो काम गर्दै जान्छौँ र मतदाता साथीहरु आफै सोच्न बाध्य हुनुहुनेछ ।’
मतदाताले माया, सम्मान र इज्जत दिएको भन्दै उहाँले सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो । ‘महाधिवेशन प्रतिनिधिले अत्यन्त जुझारुपन वडादेखि देखाउँदै यहाँसम्म आइपुग्नुभयो । जुन मिहेनत, सम्मान, इज्जत दिनुभयो त्यो म कहिल्यै पनि बिर्सन सक्ने छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरुले दिनुभएको मायाले मेरो राजनीति यात्रा नयाँ ढंगले सुरु गर्छु । मतदाता सबै साथीहरुलाई धन्यवाद ।’